Google Analytics မှရည်ညွှန်းစာ spam များကိုဘယ်လိုစစ်ထုတ်ရမလဲ
Referrer SPAM List - Google Analytics Reporting မှရည်ညွန်းစာ Spam များကိုဖယ်ရှားရန်
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 1, 2020 ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 1, 2021 Douglas Karr
သင် Google Analytics ၏အစီရင်ခံစာများကိုထူးဆန်းစွာရည်ညွှန်းသူများကိုတွေ့ရန်အတွက်သာစစ်ဆေးဖူးပါသလား။ သင်သည်သူတို့၏ site သို့သွားပြီးသင့်အားအကြောင်းပြချက်မရှိသော်လည်းအခြားကမ်းလှမ်းချက်များစွာရှိသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? ထိုလူများသည်သင်၏ site ကိုအသွားအလာကိုအမှန်တကယ်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
သင်မည်သို့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါလျှင် Google Analytics အလုပ်လုပ်ခဲ့၊ စာမျက်နှာဝန်တိုင်းတွင် pixel တစ်လုံးထပ်ထည့်သည်။ ၎င်းသည်တစ်တန်ဒေတာကိုသိမ်းယူပြီး Google Analytics အင်ဂျင်သို့ပို့သည်။ ထို့နောက်ဂူဂဲလ် Analytics မှအချက်အလက်များကို deciphers နှင့်သင်ကြည့်နေသောအစီရင်ခံစာများသို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်စည်းလုံးစေသည်။ အဲဒီမှာမှော်အဘယ်သူမျှမ!
သို့သော်အချို့သောထူးဆန်းသော spamming ကုမ္ပဏီများသည် Google Analytics ၏ pixel လမ်းကြောင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ယခုလမ်းကြောင်းအတုနှင့်သင်၏ Google Analytics ဥပမာကိုနှိပ်ပါ။ ယူအက်စ်အေကုဒ်ကိုသင်စာမျက်နှာ၌သင်ထည့်သွင်းထားသော script မှရပြီးသင်၏ဆာဗာမှ GA ဆာဗာများမှသင်၏လွှဲပြောင်းမှုအစီရင်ခံစာများပေါ်လာသည်အထိထပ်ခါထပ်ခါနှိပ်သည်။
သင်၏ site မှလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုသူတို့ဘယ်တော့မှစတင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်အမှန်ပင်ဆိုးဝါးပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်တကယ်ကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဖို့သင့် site စရာနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ငါကငါ့အထူဦးခေါင်းခွံမှတဆင့်ရတယ်သည်အထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထပ်ခါထပ်ခါသူတို့ကျော်လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်သောအရာကိုရှင်းပြပြီးတော်မူသောငါတို့၏အိမ်ရှင်နှင့်အတူဤအပေါ်လောက်သွား၏။ အဲဒါaကိုခေါ်တယ် တစ္ဆေလွှဲပြောင်း or တစ္ဆေကိုရည်ညွှန်းပါသည် သူတို့သည်သင်၏ site ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအမှန်တကယ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဂူးဂဲလ်ကလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ spam တွေရဲ့ဒေတာဘေ့စ်ကိုဘာကြောင့်မစသိမ်းထားတာလဲမသိသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအတွက်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုအလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်။ အမှန်တကယ်အလည်အပတ်ခရီးအမှန်တကယ်မရှိသောကြောင့်ဤစာပို့သူများသည်သင်၏သတင်းပို့ချက်များနှင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အတွက်ရည်ညွှန်းစာ spam များသည် ၄ ​​င်းတို့ site ၏လည်ပတ်မှုအားလုံး၏ ၁၃% ကျော်ရှိသည်။
Referrer Spammers များကိုပိတ်ဆို့သော Google Analytics တွင်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
သင်၏ Google Analytics အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။
သင်အသုံးပြုလိုသောအစီရင်ခံစာများပါသည့် View ကိုဖွင့်ပါ။
သင်၏အစီရင်ခံစာ၏ထိပ်တွင်နှိပ်ပါ + Segment ထည့်ပါ
အပိုင်းကိုအမည်ပေးပါ traffic အားလုံး (spam မရှိပါ)
သင်၏အခြေအနေတွင်ဖော်ပြရန်သေချာပါစေ ထုတ်ပယ် အရင်းအမြစ် regex ကိုက်ညီသည်.
Piwik အသုံးပြုသူများအသုံးပြုသော Github တွင် referrer spammers စာရင်းအသစ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်တော်တော်လေးကောင်းပါသည်။ အောက်ပါစာရင်းကိုအလိုအလျောက်ဆွဲယူပြီးဒိုမိန်းတစ်ခုချင်းစီပြီးနောက် OR ထုတ်ပြန်ချက်ဖြင့်စနစ်တကျ format လုပ်နေတယ် (အောက်ဖော်ပြပါစာသားနေရာမှ Google Analytics သို့ကူးယူပြီးကူးယူနိုင်သည်):
သင့် site မှလွှဲပြောင်းပေးသော spam များကိုတားဆီးရန် server scripts နှင့် plugins များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့၊ ဒါကသင့် site ကိုအမှန်တကယ်လည်ပတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ ဤသူများသည် scripts များကိုသူတို့၏ဆာဗာမှတိုက်ရိုက်အတုပြုလုပ်ထားသော GA pixel ကိုအသုံးပြုကြသည်။
Tags: analyticsရည်ညွှန်း spam ပိတ်ပင်တားဆီးမှုanalytics googleရည်ညွှန်း spamရည်ညွှန်း spam များစာရင်း
တောရိုင်း Apricot - All-In-One Paid Membership Platform တစ်ခု
3:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 33
ဤအကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ၏အ stats ပေါ်မှာရှိသည်ဖို့နှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 27 တွင်
သင်လောင်းသည် လွှဲပြောင်းသော spam များသည်သင်၏ site သို့အမှန်တကယ်ပင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဖြေမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Referrer Spam အကူအညီ (@RefSpamHelp)
မေလ 6, 2015 မှာ 1: 03 pm တွင်
ငါတို့သည်လည်း referrer spam များနှင့်အတူအချို့သောမျက်ဒေါသရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် web တွင်တွေ့ရသော“ ဖြေရှင်းနည်းများ” ကိုကြိုးစားခဲ့သည် - btw htaccess-manipulaton သည်သရဲရည်ညွှန်းသူများအားတားဆီးခြင်းမရှိဘဲ၊ အချိန်အတော်ကြာ GA ၌ filters များကိုကိုယ်တိုင် ဖန်တီး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် - http://www.referrer-spam.help ...
1:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 28 တွင်
တဖန်တစ္ဆေရည်ညွှန်းအဓိကကစားသမားဖြစ်လာကြပုံရသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသစ်တင်လိုက်ပြီ သင်ထောက်ပံ့နေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေလ 21, 2015 မှာ 5: 23 pm တွင်
1:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 29 တွင်
ဇွန် 11, 2015 မှာ 3: 16 pm တွင်
ဒီမှာအများကြီးကူညီနိုင် အခုတော့ bounce rate ပြောင်းလဲမှုကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပါ။ to
1:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 50 တွင်
ငါ Google Analytics အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေးရန်အကြံပေးချက်ကို update လုပ်ခဲ့တယ်။ ဤနည်းဖြင့်သင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းမြင်နိုင်သည်။
5:2015 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 21
၎င်းသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရှိသောအထက် / အောက်အနှံ့အပြားတွင်ရှိသော spam များဖြစ်သည်။ spam များသည်၎င်းကို spam လုပ်ပြီးပြန်လည်ကုစားနိုင်သည်။
သင်က IP blocks သို့မဟုတ်အကွာအဝေးတစ်ခုရှိမရှိသိရန်တစ်ခုခုကိုစစ်ဆေးပြီးပြီလား။
၁။ ကြာချိန်ကိုကြာရှည်စွာရေတွက်ရန်ကွတ်ကီးကိုပြန်လည်ထားရန်ကျွန်ုပ်ပြောချင်ပါသည်၊ သို့သော်စက်များကကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဆက်လက် pinging လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များစီးဆင်းစေသောကြောင့်၎င်းအရာများကို DDoS တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ခံယူရန်လိုအပ်သည်
၂။ ပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုလုပ်ပြီးကုဒ်အသစ်ကို Google Tag Manager တွင်ထည့်ပါ။ နောက်တစ်ခုကအကောင့်အသစ်တစ်ခုလုပ်ခြင်းနှင့် profiles ၄ ခုကဲ့သို့လုပ်ခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးနံပါတ် -2 သို့မပြီးနိူင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာက spammers တွေက UA နံပါတ်တွေကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်တာဒါမှမဟုတ် UA နံပါတ်တွေကိုအတူတကွလျစ်လျူရှုတာသာဖြစ်ပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး url builder tool ကိုသုံးနေတယ်။
သြဂုတ် 13, 2015 မှာ 6: 06 AM
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို ရယူ၍ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက် htaccess ဖိုင်ကိုတည်ဆောက်သောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ သွားကြ၊
14:2015 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 20
Colin, ဒီဟာစိတ်ကူးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်! ငါအဲဒါကိုပို့စ်ထဲထည့်မယ်။
ဒွန် Schindler (@donschindler)
8:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 50 တွင်
8:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 50 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Don! အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာ 22, 2015 မှာ 10: 27 AM
တကယ်အသုံးဝင်သည်။ ဤ spam အသွားအလာအမျိုးအစားသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအားဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုပြသခြင်းမရှိပေ။
1:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 55
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် spam များပြည့်နှက်နေပြီး adsense သည်ကျွန်ုပ်အားပိတ်ပင်ထားပါသည်
3:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 10
ယနေ့တွင် Spam သည်ကြီးမားသောပြissueနာဖြစ်လာသည်။ သို့သော်၊ ဤပို့စ်သည်သင်၏ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအမှန်တကယ်ရေးသားနေသောလူများကမဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာ Google Analytics ကိုအတုလုပ်နေတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ Adsense ကိုလုံးလုံးလျားလျားမသက်ရောက်စေသင့်သော်လည်းသင်၏ Google Analytics ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
ဇန်နဝါရီ 19, 2016 မှာ 8: 30 AM
ငါတကယ်ဒီ spam ကိုအတူတက်ကျွေးမွေး၏။ ဒါကငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဇန်နဝါရီ 19, 2016 မှာ 11: 32 AM
ငါလည်းကောင်းကောင်းပဲ Google ကဒီအတွက်အဖြေတစ်ခုမရသေးဘူးဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။
ဇန်နဝါရီ 19, 2016 မှာ 10: 33 AM
ဇန်နဝါရီ 19, 2016 မှာ 11: 31 AM
ဇန်နဝါရီ 24, 2016 မှာ 9: 14 AM
မင်းရဲ့ဆောင်းပါး Douglas အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဂရိတ်ဖတ်ပါ။ spam ကိုကျွန်တော်လုံးဝမုန်းပါသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပြproblemsနာများစွာဖြစ်စေခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏ wordpress ဗားရှင်းအဟောင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ wordpress ဆိုဒ်များကိုပျက်စီးစေပါသည်။
ကျိန်းသေငါ၏အ site ပေါ်တွင်ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေသွား။
ငါသည်လက်ရှိတွင်စျေးကွက်သမားများအတွက် wordpress blog တစ်ခုစတင်နေသည်။
မေလ 1, 2016 မှာ 11: 28 AM
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ် .. ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ com.google.android.googlequicksearchbox / .com မှအနည်းငယ်လည်ပတ်မှုများရရှိသည်
အဲဒီမှာ spam တွေပါဝင်ပါသလား။ မင်းရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးပါ
မေလ 3, 2016 မှာ 10: 26 AM
မင်္ဂလာပါဖူဇီ၊ အဲဒါကတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးသူလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Google Android မိုဘိုင်း app.
Sheena Karim တဲ့
သြဂုတ် 11, 2016 မှာ 10: 46 AM
အဘယ်ကြောင့်သရဲတစ္ခုလွှဲပြောင်းဖြစ်ပျက်သည်ဤ spammers ကထဲကရသနည်း
သြဂုတ် 11, 2016 မှာ 10: 49 AM
ဒါဟာရိုးသားစွာတကယ်စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ တစ်ခုတည်းသောအကျိုးကျေးဇူးမှာခေတ်မီဆန်းပြားမှုမရှိသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသုံးစွဲသူများသည်ရည်ညွှန်းသူများကိုရှာဖွေပြီးသူတို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မသိနားမလည်သောဆိုက်ပိုင်ရှင်များကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်ဈေးချို။ ရယ်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။